🥇 ▷ Sanduuqa Tafaariiqda liita ee Galaxy A90 5G, Boostada ayaa Xaqiijiyay Faahfaahinta Muhiimka ah ✅
Sanduuqa Tafaariiqda liita ee Galaxy A90 5G, Boostada ayaa Xaqiijiyay Faahfaahinta Muhiimka ah
Samsung ayaa horey shaaca uga qaaday inay ka shaqeyneyso taleefanka casriga ah ee A-tax, oo leh 5G taageero, horaantii isbuucan. In kasta oo si qalad ah loo galay, waxaan hadda ognahay in Galaxy A90 5G uu ku dhex jiray shaqooyinka ayna tahay inuu dhowaan yimaado. Evan Blass wuxuu sii siiyay aaminaad ku aaddan xantaan isagoo bogiisa Twitter soo dhigay magaca aaladda, i.e Galaxy A90 5G. Si kastaba ha noqotee, waxaan sidoo kale marqaati u aragnay boosteejo rasmi ah oo muuqda iyo sanduuqa tafaariiqda ee taleefankaan casriga ah ku soo daadanaya internetka.
Muuqaalka la soo daadiyay ee hoos ku lifaaqan wuxuu na siinayaa marka hore eegida casriga ah ee Galaxy A90 5G. Galaxy A90 5G ayaa kari karay gadaal gadaal ka muuji dhajiye laba dhawaaq leh iyo ‘Infinity-U notch’ (isha biyo-doon) xagga hore. Cabbirka muujinta ayaa la filayaa inuu noqdo 6.7-inji, oo leh go’aan HD-full ah iyo gole Super AMOLED ah.
– 萌萌 的 电教 (@MMDDJ_) Ogoosto 30, 2019
Maya, Galaxy A90 5G ma keeno wax waali ah oo waali ah sida sawirada kamaradaha-rogida ee loo yaqaan ‘Galaxy A80’ – oo laga bilaabay Hindiya horaantii bishii Ogosto. Waxay xirxiraysaa kumbuyuutar muuqaal ah oo kaamirooyin ah, kaasoo qeexitaannadiisa hadda lagu xaqiijiyay liig kale – sanduuqa tafaariiqda oo sawirkiisa aad aragto ku lifaaqan xagga sare.
Haa, waligeed ilaa markii ay soo baxday warka sheegaya in Samsung ee soo degeysa Galaxy A90 5G ay ku dhacday internetka, daadadku waxay ku soo badanayeen. Sanduuqa tafaariiqda wuxuu xaqiijinayaa in taleefanka casriga ah la soo bixi doono a 48MP dareeme koowaad (waxaa suurta gal ah shirkada ISOCELL Bright GM1 sensor). Waxaa lagu lifaaqi doonaa muraayad aad u balaaran oo 8MP ah iyo 5MP dareeme qoto dheer ah. Waxaad sidoo kale heli doontaa kamarad 32MP selfie oo kuxiran meesha biyuhu ka dhacaan.
Xarka hoostiisa, the Galaxy A90 5G waxaa ku shaqeyn doona isku-xir ‘octa-core chipset’, kaas oo lagu xamanayay inuu yahay qalabka loo yaqaan ‘Snapdragon 855 chipset’ iyo modem X50 ee isku xirka 5G. Tan waxaa lagu mideyn doonaa 6GB oo RAM ah iyo 128GB kaydinta gudaha ah. Sanduuqa tafaariiqda ma soo bandhigi doono muuqaalka ugu muhiimsan ee taleefankan, i.e cabirka batteriga iyo taageerada 25W ee degdegga ah.
Meelo fara badan oo daadad ah oo daadad ku keenaya internetka ayaa hadda tilmaamaya in furitaanka Galaxy A90 5G uusan aad uga fogayn. Maxaad filashooyinka aad ka qabtaa xagga hore u qiimeynta Noosheeg qeybta faallooyinka ee hoose.